"FBS၏ Lexusကားကို မောင်းနှင်ပါ" ပြိုင်ပွဲ၏ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားမှတ်တမ်း
"FBS၏ Lexusကားကို မောင်းနှင်ပါ" ပြိုင်ပွဲ၏ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်တွင် FBSမှ စီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်!
ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ ဆုရှင် Mr. Atef Abu Elhamayed Abdellahရဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်. FBSမှ ကံစမ်းမဲနှိုက်ရာတွင် Lexus RX 200t ဇိမ်ခံကားရဲ့ ဆုရှင်အဖြစ်ကြေညာခံရသူ ကံထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်.
Mr. Atef Abu Elhamayed Abdellahနေထိုင်ရာ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင် Lexusရုံးခွဲမရှိတာကြောင့် အခြားကားအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်စေရာတွင် - Toyota Fortuner 2018ကို အစားထိုးရွေးချယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်! အစားထိုးခဲ့သည့်ကားမှာ ဆုရသည့်ကားနှင့် တန်ဖိုးတူညီပြီး ကွာလတီတူညီတာကြောင့် ကားကိုမြင်မြင်ချင်း ချက်ချင်းရွေးချယ်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ကံထူးရှင်သည် သူ့မိသားစုနှင့်အတူ လာခဲ့ပြီး၊ ဒီနေ့ကို လာမည့်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အမှတ်ရနေမှာပါ။ ကံထူးရှင်အား ဆုပေးရန် အထူးပြင်ဆင်ထားသည့် FBS ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှ သူ့အားဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ FBS အီဂျစ်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဂုဏ်ပြုသည့် သူ့ကားသစ်အတွက် သောနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ရခဲ့ပြီး၊ သူ့စန်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပုံများကို နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။
Mr. Atef Abu Elhamayed Abdellahကတော့ ဒီဆုလက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အလွန့်အလွန်ကို ကျေးဇူးတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်. ဒီလိုရရှိလာလိမ့်မယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ မမျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် FBS ရဲ့ကံစမ်းမဲရွေးချယ်သည့် စက်များက ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှ သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ, သစ်လွင်တောက်ပတဲ့ ကားသစ်ကြီးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေပိုမိုချဲ့ထွင်ဖို့ စိတ်ခွန်အားတွေ ရရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ! နောက်ထပ် FBSရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းတွေကို တင်ပေးသွားပါဦးမယ်!